ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲ မြင်းခြံတွင် ပြုလုပ် - DVB
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲ မြင်းခြံတွင် ပြုလုပ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ၄၅. ဦးကော်မတီက တင်သွင်းလာတဲ့ အစီရင်ခံစာ ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကို ဒီကနေ့ သြဂုတ် ၈ ရက် မနက်ပိုင်းက မြင်းခြံမြို့ မဏိကဉ္စာနာခန်းမရှေ့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ကြိုဆိုပွဲမှာ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦး နှင့် ဆရာညီမင်းညိုတို့က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီထောက်ခံပွဲမှာ လူအင်အား ၃၀၀၀ လောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြစို့ စတဲ့ ဗီနိုင်းတွေကိုကိုင်ဆောင်ကာ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ေ ခုလို ထောက်ခံပွဲတွေကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ အပါအဝင် အခြားမြို့တွေမှာလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း-ရီရီထွန်း (မြင်းခြံ)၊ ဓာတ်ပုံ အေးချမ်းနိုင်
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၄၅. ဦးေကာ္မတီက တင္သြင္းလာတဲ့ အစီရင္ခံစာ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲကို ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ မနက္ပိုင္းက ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ မဏိကၪၥာနာခန္းမေရွ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ရင္ျပင္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီကေန႔ႀကိဳဆိုပြဲမွာ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦး ႏွင့္ ဆရာညီမင္းညိဳတို႔က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေထာက္ခံပြဲမွာ လူအင္အား ၃၀၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံၾကစို႔ စတဲ့ ဗီႏိုင္းေတြကိုကိုင္ေဆာင္ကာ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ေ ခုလို ေထာက္ခံပြဲေတြကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မုံ႐ြာ အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
သတင္း-ရီရီထြန္း (ျမင္းၿခံ)၊ ဓာတ္ပုံ ေအးခ်မ္းႏိုင္
Tags: ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမြင်းခြံတွင် ပြုလုပ်
Previous story ဖလုံကျေးရွာတွင် တောင်ကျရေကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့် ရေဝင်ရောက်
Next story ပဲခူးတိုင်း ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် လူဦးရေ ၁၄၀၀၀ ကျော် ခိုလှုံ
01	လီဗာပူးအသင်းက စိတ်ဝင်စားနေသည့် ဒမ်ဘီလီ ဘာစီလိုတွင် ဆက်နေမည်
03	ညောင်တုန်းတွင် မြစ်ကမ်းပါပြိုကျသဖြင့် နေအိမ် ၃ လုံး အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်း
04	မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ပြန်လာသည့် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၁ ဦးတွေ့ရှိ
05	မြိတ်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ဘောလုံးပွဲတွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီးလူ ၅ ဦးသေဆုံး